गगनकै अघि जब महेश बस्नेतले दिए यस्तो च्यालेन्ज - हाम्रो देश
गगनकै अघि जब महेश बस्नेतले दिए यस्तो च्यालेन्ज
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद आएर बहस गर्न चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विषेश समयमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर बाहिर बाहिर भाषण गर्दै हिडेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई म संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु ।
’ उनले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री अनेकौ भाषण गर्दै हिडेको तर संसदमा आएर बहस गर्ने हिम्मत नराखेको बताए । उनले भने,‘संसदबाहिर हुक्के चिलिमे राखेर माथि बसेर गफ दिने अनि तल बसेर ताली पिट्ने ? संसदमा हामी बालकविता सुनाएर बस्ने होइन, संसदलाई छलेर भागेर होइन ।’ सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले गफ मात्रै गरेको भन्दै २ वर्ष पहिला बनेको सिन्धुलीको पुल अहिले उद्घाटन गरेको भन्दै आलोचना समेत गरे ।
उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बाटो पुलको शिलान्यश गर्न भ्याइनभ्याई छ । प्रधानमन्त्रीलाई चमत्कार गरेको भनेर चरम अल्पज्ञान, ढाँट्ने बानी लागेको छ । २०७४ साल चैतको २ गते खानेपानीमन्त्री आएपछि २०७५ साल असोजसम्म ठेकेदारसम्म मोलमोलाई मिलेन । ९ महिना आयोजनाको कामको सिन्को पनि नभाचेर अहिले यत्रो फुर्ति ? २३ वर्ष आयोजनाका लागि समय लाग्दा माफी माग्नुपर्दैन? श्रेय लिने होडबाजी ?
धारा खोलेर, बाल्टी, कहिले उठेर कहिले बसेर उद्घाटन गर्ने ? तमासा गर्ने ?’ सांसद थापाले केहीदिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीले तामाकोशी जलपिवद्युत आयोजनामा समेत उद्घाटनको यस्तै तमासा देखाउने दाबी गरे । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । ‘फाष्ट ट्रयाक, बबई सिंचाई आयोजनाका बारेमा कोही भन्दैन । नेतृत्वबाट गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएर गफ चुट्ने ?
चालू भएको २ वर्षपछि सिन्धुलीको उद्घाटन ? के को तमासा हो ? एकसय ६५ वटा सडक अस्ति उद्घाटन भएको छ । तर त्यसका लागि अहिले बजेट भनेको ३ अर्ब पैसा छ । आवश्यक ५७ अर्ब । उद्घाटन नै गर्ने हो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा सडकका दरले ठोक्दिउँ, १ हजार ६ सय ५० वटा बनाइदिँउ । अहिलेको सरकारले मात्रै गरेन भनेर भन्न खोजेको छैन । हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा समस्या छ ।
यसलाई बनाउनका लागि संसदले दर्जनौ काम गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर तथ्यमा बहस गर्न चुनौती दिदै सांसद थापाले व्यङ्ग्य गर्दै भने,‘उद्घाटन बालुवाटारभित्र नयाँ बनेको भवन र बनेको कोठा उद्घाटन गर्नुहोला ।’ यसै क्रममा जवाफ फर्काउँदै संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका कांग्रेस सांसद गगन थापालाई सत्तारुढ नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले सांसदको संख्या कति हो भन्ने सम्झाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद थापाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिका तीन वर्षमा के के भए त्यसमाथि सदनमै बहस गर्न चुनौती दिएका थिए । ‘२०६४ सालमा एमालेलाई जनताले ३४ सिटमा सीमित गरिदिएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई २३ सिटमा सीमित गरिदिएका छन् । समानुपातिकसमेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको ६३ सिट छ’,
उनले भने, ‘त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बालहठ देखाउने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु– यो बोकाको शैलीले दाईं गरिँदैन, दाईं गर्न गोरुकै शैली चाहिन्छ ।’ संसदको यही संख्या देखाउँदै नेता बस्नेतले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले नै प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । ‘आज संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौं नसके बस्तुनिष्ट ढङ्गले त्यसको विरोध गरौं’, नेता बस्नेतले भने ।
मेलम्चीलेको पानीले काठमाडौं उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय मान्य जीहरुको प्रेसर बढेको छ । प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस् । हुन त गंगालाल अस्पताल नकिजै छ । त्यसको स्तरउन्नती गरेर बनाइदिएकै छ । प्रेसर बढे छ भने पनि त्यसको उपचार गरौंला, त्यसको समस्या छैन् । यहाँ संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भन्ने ढंगले कुरा उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिदै छ । प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याउने कुरा पनि गरिदै छ ।
कतिपय युवा साथीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडठाडो बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेजन्ज गरे बालहठ देखाउने कतिपय साथीहरुलाई म भन्न चाहान्छु–यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिदैन । दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ । सडकहरू रणनीतिक सडकका रुपमा उद्घाटन गर्दा किन टाउको दुख्दै छ । सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ । ठीक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस् ।